Mamerina Ny Fahadisoana 100 Taona Lasa Mametraka ny Revolisiona Bolshevik ho Votoaty Virtoaly ireo Manam-pahaizana Rosiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Desambra 2016 6:49 GMT
Revolisiona Oktobra tafahoana amin'ny zavatra virtoaly. Sary namboarin'i Kevin Rothrock.
Hanamarika ny fahazato taonan'ny Revolisiona Rosiana ny taona ho avy, ary maro manerana izao tontolo izao no azo antoka fa misaintsaina ny lova navelany sy ny fahatsiarovana azy. Hetsika mana-tantara manerantany ny Revolisiona Rosiana, ary an'ny rehetra ny fahatsiarovana azy fa tsy an'i Rosia irery.
Na izany aza, ny Ampira Tsarista no toerana manokana nananan'ny Bolshevika traikefa lehibe, ary namaritra an'i Rosia mandritra ny iraika amby fitopolo taona manaraka ny revolision'izy ireo. Saingy nirodana folo taona lasa izay i URSS, ary tsy fantatra izay fomba hanaovan'i Rosia ankehitriny ny taona 2017.
Amin'ny fotoana ironan'ny governemantan'i Vladimir Putin amin'ny fanalefahana ny fitantarana mampiseho ny fanjakana Rosiana ho mandrakizay, sarotra ny milaza ny fomba hampiharan'i Kremlin ny fomba fitantarana ny iray amin'ireo fotoana mampisara-kevitra indrindra teo amin'ny tantaran'ny zanak'olombelona. Ary ankamantatra ho an'ny maro izany fa tsy ho an'ny manampahefam-panjakana ihany. Satria miha-akaiky ny fahazato taona, maro ireo Rosiana hiezaka hiatrika ny tantara sy ny lova navelan'ny revolisiona. Saingy ahoana? Ahoana no hitantaran'ny olona ny Revolisiona Rosiana?
Mikhail Zygar. Sary: Facebook
Andrana iray ny tetikasa an-tserasera “1917: Tantara Malalaka,” izay mitantara indray ny zava-nitranga tamin'ny taona 1917 amin'ny alalan'ny famoahana isan'andro ireo taratasy, diary, tononkalo, horonan-tsary, sy sary mikasika ireo olona 1500 manan-danja indrindra nandritra ny vanim-potoana. Nanangana ny tetikasa i Mikhail Zygar, lehiben'ny tonian-dahatsoratra teo aloha tao amin'ny fahitalavitra Dozhd sady mpanoratra ny “Lehilahy rehetra ao Kremlin: Ao anatin'ny Tokotanim-Pahefan'i Vladimir Putin,” ary nanakarama olona maherin'ny zato, ahitana mpanao gazety, manam-pahaizana, mpanakanto, sy olon-kafa. Manana mpanohana mahavariana ihany koa ny “1917: Tantara Malalaka”: ny milina fikarohana goavana Yandex, Sberbank, ny Tretyakov Gallery, ny gazety Kommersant, ny Mozea Ara-tantara Rosiana, Ny Tahirim-panjakan'ny Federasiona Rosiana ary ny Tahirim-panjakana Rosiana ho an'ny Literatiora sy ny Zava-kanto – raha hitanisa ny vitsivitsy.
Araka ny filazan'i Zygar, ny tanjon'ny tetikasa dia ny “hanorina indray ny zava-misy tamin'izy 100 taona lasa” raha nisy ny aterineto. Ny zavatra ho hitanao ao dia “Zava-misy virtoaly”-n'ny revolisiona :
Ny tanjonay dia ny hampalaza ny tantara. Tianay hahita ny olona fa tsy lohahevitra mankaleo tafasaraka tanteraka amin'ny zava-misy sy tsy misy fifandraisana mivantana amin'izy ireo ny tantara. Vao mainka aza izahay te-hampiseho fa fiainana izany tantara izany. Olona tahaka antsika ihany ireo. Ary milaza betsaka tsy momba ny zava-nitranga ihany ny tantara, fa momba ny tenantsika koa. Tsy maintsy mahatakatra ny tsirairay fa miatrika olana mitovy sy hevitra natrehan'ny olona iray manoratra ao amin'ny diariny 100 taona lasa izay izy.
Tetikasa mahavariana tokoa ny “1917: Tantara Malalaka”, indrindra ho an'ireo liana amin'ny loharanom-baovao ifotony tamin'ny vanim-potoana. Ohatra, afaka mamaky izao manaraka izao amin'ny lahatsoratra navoakan'i Dowager Maria Fedorovna, renin'i Nicholas II tamin'ny 9 Desambra 1916 ianao:
Ambanin'ny 5 degre izao ary tsy hiala ny trano aho. Nandray vehivavy mahantra aho, izay voaheloka noho ny anton-javatra ny rainy ka nampidirina am-ponja. Nangataka fanampiana izy. Taorian'ny sakafo maraina, nihaona tamin'ny tovovavy Krupenskaya izahay. Tamin'ny 4 ora tolakandro, tonga niakanjo tahaka ny tena vehivavy ny zanako malalako [zanany vavy Grand Duchess Olga Aleksandrovna]. Toa falifaly izy. Niara-nisakafo hariva tamin'i Sandro [Grand Duke Alexandr Mikhailovich, rahalahin'i Nicholas II] izahay satria tany amin'ny teathra ny hafa rehetra.
Ary misy ity andalana nivoaka tamin'ny 12 Desambra ity, izay avy amin'i Nikolai Astrov, mpitan-tsoratra ao amin'ny Duma-n'i Moskoa sy mpikambana ao amin'ny Kadet:
Vitsy dia vitsy ny olona nasaina manokana tamin'ny fivoriana ity. Anisan'ireo nanatrika ny Printsy Lvov, Kishkin, Maklakov, sy ny tenako. Taorian'ny fanambarana nataon'ny Printsy Lvov izay nilazainy fa tsy maintsy mihazona tsiambaratelo ny olona rehetra, niresaka momba ny toe-po ao Petrograd tamin'ny antsipiriany betsaka izy. Araka ny heviny, mety hiatrika fanonganam-panjakana tsy ho ela isika. Mandray anjara amin'izany teti-dratsy izany ireo ao anatin'ny miaramila, ny printsy lehibe sy ny mpanao politika. Tsy maintsy mivonona amin'izay ho fiantraikany isika. Tamin'ny teny somary manjavozavo, nilaza ny toa fikasana hanala an'i Nicholas II sy Alexandra Feodorovna izy. Tsy dia mazava ny kabarin'ny Printsy Lvov. Sarotra ny mandika azy. Ankoatra izany, toa tsy mahalala zavatra manokana izy, satria nampahafantatra fotsiny ny fisian'ny fiomanana.
Ireo voasoratra ireo, izay miainga amin'ny zava-mahazatra ka hatramin'ny mpihevitra fisian'ny teti-dratsy dia maneho avonavona sy ny fatahoran'ireo mpiantsehatra goavana tamin'izany fotoana izany. Manome topi-maso mahavariana andavanandro mikasika ny zavatra fantatsika rehetra fa ho avy amin'ny Febroary 1917 (fialàn'i Nicholas II, sy ny fametrahana fahefam-panjakana vonjimaika roa, ny iray avy amin'ny Governemanta ary ny iray Sovietika Petrograd) ihany koa izy ireo .
Ahitana loharanom-baovao lehibe sy vaovao ihany koa ny tranonkala, tahaka ny “Toro-lalana ho an-dry Romanovs,” izay manome ny tetiharan'ny fianakaviana nandritra ny fiovan'ny taonjato. Angamba ny tena mahaliana sy manampy kokoa dia ny fizaran-tantara “Iza no Mifandray Amin'iza,” ka amin'ny fanindriana sary sy anaran'olona, dia miseho ny fifandraisana mikasika izay olona tiany, ankahalainy, tsy tiany, lasa namany, rafy, ary novadiany. Fomba mahafinaritra hamaritana ny fifandraisana isan-karazany eo amin'ny fianakavian'ny mpanjaka sy ny manodidina azy izany.
Na dia eo aza ireo feo maro isan-karazany, dia misy ny fahanginana lehibe amin'ireo voasoratra rehetra ireo: ny feon'ny olona saranga ambany izay nandray anjara, za-draharaha, sy navitrika ara-politika tamin'ny dingana revolisionera. Amin'izay heviny izay, mampiseho ny traikefan'ny razamben'izy ireo manokana ny tonian-dahatsoratry ny tranonkala – ahitana manam-pahaizana, mpanakanto, sy sangany. Mampalahelo izany toe-javatra. Araka ny nasehoan'ny fikarohana ara-tantara tao anatin'ny 25 taona, ahitana harena an-tsoratra mampita ny feon'ny “vahoaka” amin'ny endrika taratasy, diary, fanaovan-gazety, zavakanto, sy tononkalo ny tahirin-kevitra ao Rosia.
Izany fahanginana izany angamba no esoeso lehibe indrindra amin'ny fikasan'ny tranonkala hanangana fahatsiarovana ny revolisiona. Ny tsy firaharahiana ny feo sy ny rafitra ara-tantaran'ny olon-tsotra no tena nampiavaka ireo sangany Rosiana maro tamin'ny taona 1917. Zato taona tatỳ aoriana, mamerina izany fahadisoana izany amin'ny zava-misy virtoaly ireo taranaky ny sangany efa ripaka, na dia eo aza ny fikasana tsara sasany.